Hanao Plov Ve Tajikistan Sy Uzbekistan, Fa Tsy Ady Amin’ny 2017? · Global Voices teny Malagasy
Hanao Plov Ve Tajikistan Sy Uzbekistan, Fa Tsy Ady Amin'ny 2017?
Voadika ny 03 Janoary 2017 14:52 GMT
Samarkand plov. Sary an'i Robert Wilson mpampiasa Flickr.
Nampiraisin'ny lovia misy vary feno menaka, hena sy karoty, saingy sarahan'ny olana momba ny fahaszoana rano, sisintany voafaritra amin'ny ampahany ary voasoratra amin'ny lova manankaren'ireo firenena roa malaza indrindra any amin'ny Làlan'ny Lamba Landy; toy izany ny hasarotry ny fifandraisana misy eo amin'i Tajikistan any Azia avofoany sy Uzbekistan.
Ny “oshi palav” an'i Tajikistan sy ny “palov” an'i Uzbekistan (karazan'ny lovia antsoina amin'ny anarana mahazatra hoe plov any Azia Afovoany ary pilau any Afganistan), dia samy voasoratra ao amin'ny Lisitry ny Harena ara-Kolontsaina Tsy Azo Anombinan'ny zanak'Olombelona napetraky ny UNESCO tamin'ny fiandohan'ity volana ity (Desambra 2016), ny herinandro izay nanapahan'ny firnena roa tonta hevitra ny hameria indray ny fifanarahana an'habakabaka nampiasaina farany efa ho tamin'ny dimy ambiroapolo taona lasa izay.
Fifanandrifian-javatra? Eny tokoa.
Ary amin'izao fotoana izao ho an'ny zavatra manan-danja. Tia mahandro plov aho.
Tamin'ny taona lasa, samy nangataka tany amin'ny UNESCO i Uzbekistan sy i Tajikistan mba ho ekena ho toy ny tena harena ara-kolotsaina ny Plov na ny Pilau. Azo inoana anefa fa ny nanaovan'izy ireo izany dia noho ny fifaninanana fa tsy noho ny finamànana, satria ny fangatahan'izy ireo tsirairay avy tany amin'ny UNESCO dia nielanelana herinandro vitsivitsy.
Mety, na izany aza, ny nanomezan'ny UNESCO azy ireo ny voninahitry ny maha-mpiara-mihazona ny lova ara-kolotsainan'ny sakafo, satria nisy dingana tena izy natao tato ho ato mba hitsaboana ny fifandraisain'ny roa tonta izay poizina nandritra ny fahaleovantena.
Noho izany, raha afaka entina amin'ny lovia feno vary sy didin-kena kisoa vaventy vitsivitsy ny firenena roa tonta, aiza ny hena omby?
1. Lozanareo ry tohodrano mpamatsy herinaratra!
Ny mety ho tena olana lehibe amin'ny fifandraisan'ny roa tonta angamba dia ny tohodrano mamatsy herinaratra antsoina hoe Rogun izay mety ho tohodrano lehibe indrindra eo amin'izao tontolo izao indray andro any, ary indray andro any mety hitondra ny anaran'ny Filoha Tajik Matanjaka, Emomali Rakhmon.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity (2016) , araka ny nanamarihan‘ny tranonkala Eurasianet mifantoka amin'ilay faritra azy, zava-dehibe ho an'i Tajikistana manankarena rano, mahantra herinaratra ny fanorenana ilay tohodrano.
Namidin'ny governemanta i Rogun noho ny fampanantenana maimaika sy hafahafa mifototra amin'ny hoavy miroborobo sy tsara orina. Ny fikasana dia ny hampitomboana avo roa heny ny fahafahan'i Rogun mamokatra herinaratra, hamarana ny tsy fahampian'ny herinaratra ary hamela ireo ambiny betsaka sisa tavela mba haondrana any Pakistan sy Afghanistan. Tamin'ny lahateny iray ho an'ny parlemanta tamin'ny 2009, nampanantena ny Filoha Emomali Rahmon fa mety ho tratran'i Tajikistan ao anatin'ny efatra taona ny fahaleovantena amin'ny angovo. Ara-teknika, efa mahaleotena sahady amin'ny lafiny angovo i Tajikistan raha jerena satria tsy manafatra herinaratra izy, fa izany dia noho ny fametrahana ny fampihenanana fampiasàna herinaratra mandritra ny ririnina izay nampilentika ny tanàna maro ho anatin'ny haizina mandritra ny ora maro isan'andro.
Nahatonga ny fanoherana tsy mitsahatra ny fanorenana nataon'i Ozbekistan matanjaka ara-tafika teo ambany fitondran'ny Filoha Islam Karimov efa nodimandry ho naharary indrindra izany rehetra izany :
Elefanta iray hafa ao anaty efitrano ny fanoherana tsy mitsahatra napetrak'i Ozbekistan amin'ilay tetikasa. Naneho ny ahiahiny i Tashkent hoe mety ho triatry ny horohorontany ilay tohodrano ary manahy hoe ny famenoana ny tohodrano dia hisakana ny fitarihana rano ho an'ny sehatry ny famboleny- zavatra roa samy mety hiteraka loza.
Tamin'ny fatra-mpiady indrindra, Karimov, izay nalevina tamin'ny volana Septambra taorian'ny niahiahiana azy ho tapaka lalan-drà teo amin'ny faha-78 taonany, na dia nanao tsilian-tsofina aza hoe mety hiditra hiady ho an'ny fahazoana rano ao amin'ny faritra ny fireneny.
2. Ny lalana volamena mankany Samarkand (sy Bukhara)
Mihevitra ny tenany koa i Tajikistan ho ny tena mpandova an'i Samarkand sy Boukhara, vatosoa roa eny amin'ny Lalana Tranainin'ny Lamba Landy, lalam-barotry ny Eoropeana sy Aziatika izay tsy mitsahatra ny manintona mpizahatany an'arivony maro isan-taona ho ao Ozbekistan, na dia lasa fanjakana polisy aza ilay firenena, misy rafitra fisoratana anarana faran'izay sarotra ho an'ny vahiny.
Amin'ny fo tsy miangatra, ny Tajik – fiteny Iraniana toy ny Farsi – no mbola be mpiteny ao amin'ireo tanàna roa, ary Tajikistan angamba no firenena Sovietika teo aloha, izay nahazo ny raharaha ratsy indrindra eo amin'ny resaka faritany, tamin'ny alalan'ny nivadihany ho repoblika Sovietika ara-panjakana tamin'ny taona 1929 taorian'ny tapaky taompolo iray sy tapany naha-faritany mizaka tena tao anatin'ny RSS Uzbek azy.
Ankoatra izany, raha ny teny izay heverina ho an'i Rakhmon sy naverin'ny bilaogy Neweurasia navoaka no inoana dia noraisina tamin'ny fomba nanetriketrika niaraka tamin'i Karimov tany aloha ilay olana:
Rakhmon: Indray andro – teo ny Profesora Muhammadzhon Shukurov, afaka manamafy izao – tany Smarkand aho niaraka [tamin'i Karimov]. Nanontany lehilahy nitsangana teo akaiky teo aho, ‘Inona ny zom-pirenenao? Nijery an'i Karimov tamin-tahotra izy ary nilaza, ‘Avy any Smarkand aho.’ Izany no toerana ahitan'ireo Tajik ny tenany any amin'io toerana io.
Efa im-betsaka nifanditra [tamin'i Karimov] ah. Efa niady in-droa mihitsy aza izahay. Ny voalohany, tsy maintsy nitondra anay nihataka i Nazarbaev, ny faharoa dia Kuchma (ny filohan'i Kazakhstan amin'izao fotoana izao sy ny filohan'i Okraina teo aloha – Ed). Niteny taminy aho, “Halaintsika i Samarkand sy Bukhara na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana!”
3. Mbola ireto sisintany mihoson-drà ireto indray
sary Flickr tariby. Tico_24.
Na manana fifandraisana kokoa noho ny hafa aza ny firenena roa tonta amin'ny resaka sisintany iraisana amin'i Kyrgyzstan (miverimberina matetika ny ady manamorona ny sisintanin'ny Tajik-Kyrgyz sy ny sisintanin'ny Uzbek-Kyrgyz miohatra amin'ny ady manamorona ny sisintanin'ny Uzbek-Tajik), ampahany kely ain'ny sisintany Uzbek – Tajik no mbola tsy voafaritra.
Ankoatra izany, tena rakotra vanja milevina ny ankilany Uzbek, heverina ho fanoherana ny fanondranana an-tsokosoko zava-mahadomelina avy any Tajikistan, izay tena toerana ifamezivezena ao anatin'ny fandraharahàna “héroïne” Eoropeana-Aziatika miainga avy any Afghanistan.
Endrika iray hafa momba ny fifandraisana ratsy amin'ireo mpifanolo-bodirindrina ny fihatahan'ny tsirairay amin'ny fototdrafitrasa any an-tsisintany nolovaina tamin'ny andron'ny Sovietika. Ohatra, vao haingana i Ozbekistan no nanokatra lalamby mitentina 2 lavitrisa Dolara naorin'i Shina izay ahafahan'ireo fiarandalamby handeha manakaiky ny sisintany iraisain'ny firenena amin'i Tajikistan, nefa tsy voatery hiampita azy io. Antenain'i Tajikistan i Shina fa hanorina làlana iray hahafahan'ny mpitondra fiarabe ao aminy mivezivezy hatrany Rosia ka hatrany Kyrgyzstan sy Kazakhstan, mandalo any Ozbekistan.
Fifandraisana Tsara kokoa manangasanga eny amin'ny faravodilanitra?
Ilay tokony ho filohan'ny Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Sary an'ny governemanta Rosiana, nahazoana alalana ny famerenana mampiasa azy.
Na izany aza mety mba hiova ho tsaratsara kokoa ny fifandraisana, ary ny antony dia ny fifidianana mananontanona an'i Shavkat Mirziyoyev ho filoha vaovao ao Ozbekistana .
Amin'ny naha-praiminisitrany nandritra ny 13 taona mahery, lasitra iray mitovy amin'ny namolavolana an'i Karimov no nivoahan'i Mirziyoyev raha fitantanana fitondrana lozabe no resahana, saingy mety manana hevi-baovao eo amin'ny sehatry ny fifampiraharahana iraisam-pirenena.
Azo antoka fa i Mirziyoyev no antony nahatonga ny firenena roa tonga niomana amin'ny famerenana indray ireo sidina, ary mbola misy famantarana manpiseho fa mety hivonona amin'ny famelàna ny hirosoan'ny fanorenana ny tohodranon'i Rogun tsy misy tabataba be loatra.
Miaraka amin'ny fipetrahan'i Mirziyoyev hitondra mandritra ny dimy taona aorian'ny fifidianana ny 4 Desambra 2016 teo, izay tsy niatrehany fifaninanana goavana, misy ihany na izany aza antony maro ahandroan-dry zareo Tajik plov mandritra ny fankalazana.
22 ora izayKazakhstan
24 ora izayKyrgyzstan